‘अधिनायकवादको शंका गर्नुपर्दैन’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा आएपछि हालै उपप्रधानमन्त्री पदमा बढोत्तरी भएका छन् । पार्टी एकीकरणपछि भने उनले एमालेमा दुई कार्यकालदेखि सम्हाल्दै आएको शक्तिशाली महासचिव पद गुमाएका छन् । एमालेमै छँदा भावी अध्यक्षका रुपमा तयारी गरिरहेका पोखरेलको पार्टीभित्रको भूमिका अब सचिवालय सदस्यका रुपमा खुम्चिन पुगेको छ ।
सरकार सञ्चालनका शैली र पार्टी एकताको काम अपारदर्शी भयो कि भन्ने राजनीतिक टिप्पणी आइरहेका छन् । यी समग्र प्रक्रिया र विषयलाई उपप्रधानमन्त्री पोखरेल आफैंले चाहिँ कसरी हेरिरहेका छन् ? यिनै विषयमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग कान्तिपुरका हरिबहादुर थापा र दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकताको बाँकी काम कहाँ पुग्यो ?
हामीले जेठ ३ गते पार्टी एकता घोषणा गर्‍याैं । त्यसपश्चात् केन्द्रीय तहमा एउटा संरचना बनाएका छौं । त्यो संरचनालाई निर्देशित गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन पनि पारित गर्‍यौं । त्यसैले महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न भइसकेका छन् । अब जनवर्गीय संगठन र विभिन्न क्षेत्रका कामलाई कसरी एकीकृत गर्ने भन्ने काम बाँकी छन् । त्यसका लागि सातवटै प्रदेशका पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रका संयोजक, सहसंयोजक र इन्चार्जहरूलाई गृहकार्य गरेर सचिवालयमा प्रस्ताव ल्याउन भनिएको छ । त्यसका अधारमा छलफल गरेर मातहतका संगठन पुन: व्यवस्थित हुन्छन् ।
धेरैका आकांक्षा छन् । व्यवस्थापन गर्न कति गाह्रो छ ?
पहिले चुनावी तालमेलको बेला पनि धेरै मान्छेलाई कसरी व्यस्थापन होला भन्ने लागेको थियो । म त्यो बेला उम्मेदवार छनोट उपसमितिको संयोजक थिएँ । १ सय ६५ र ३ सय ३० वटा सिट बाँडफाँट गर्ने, क्षेत्र टुंग्याउने काम एकदमै चुनौतीपूर्ण थियो । तर हामीले त्यस्तो काम त सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्‍यौं । चुनावमा छिटफुट असन्तुष्टिबाहेक कही पनि ठूलो समस्या रहेन । त्यसैले अहिलेको काम व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छैन । सबै संगठन सहज रूपमै मिलाउँछौं । संयोजक, सहसंयोजक, इन्चार्जहरूले तयारी गरेपछि पार्टीको सचिवालयमा छलफल गरेर छिट्टै सबै संगठन र कमिटीको पनि एकताको काम पूरा हुन्छ ।
पार्टी एकता प्रक्रियाका काम पारदर्शी भएनन्, माथिल्लो तहमा केही सीमित नेता मात्र यसमा हावी भए भन्ने गुनासो पनि छ नि ?
पार्टी एकता संयोजन समिति थियो । त्यो समितिले नै निर्णय गरेर कार्यदल बन्यो । त्यो कार्यदलले राजनीतिक प्रतिवेदन बनायो । अन्तरिक विधान बन्यो । विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन तयार भएपछि तत्कालीन दुवै पार्टीमा अनुमोदन भयो । त्यसैले प्रक्रियासम्मत रूपमै काम भयो । जनवादी प्रणालीका आधारमा कति छलफल हुन सक्यो सकेन भन्ने प्रश्न उठ्लान् । तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले जुन काम सम्पन्न गर्‍यौं, त्यो साहसिक र महत्त्वपूर्ण छ ।
तपाईं दुईपटक पार्टीको महासचिव भइसकेको व्यक्ति, पछिल्लो एकता प्रक्रियामा त्यो पद पाउनुभएन । ‘डिमोरलाइज’ गर्न खोजियो भन्ने पनि सुनिन्छ, तपाईंले केही अप्ठेरो महसुस गर्नुभएको हो ?
हामीले पार्टी विधान बनाएर एकता संयोजन समतिबाट पारित गराउँदा दुईजना अध्यक्ष राख्ने अनि अरू पद सिर्जना नगर्ने भन्ने थियो । काम गर्नुपर्दा त्यही नेतृत्वदायी टिमले जसलाई जे काम दिनुपर्ने हो, त्यहीअनुसार काम दिँदै जाने भन्ने थियो । त्यही कुरा आआफ्नो पार्टी कमिटीबाट पनि अनुमोदन भयो । तर पछि त्यो एकताको बेला सायद दुवै पार्टीका अध्यक्षलाई दुइटा अध्यक्ष भए पनि पार्टीका दैनन्दिन काममा केन्द्रित भएर लाग्न त कोही चाहिन्छ भन्ने भयो होला र कतिपय ‘म्यानेज’ गर्नुपर्ने पनि भयो होला ।
त्यसैले वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता र महासचिव पनि राख्ने प्रस्ताव आयो । झट्ट हेर्दा देशभरिकै संगठन मिलाउन कोही न कोही व्यक्तिले ‘कन्सन्ट्रेट’ भएर लाग्नुपर्ने नै थियो । संगठन व्यवस्थापनका काममा कसैले अगुवाइ गर्नैपर्ने थियो । प्रश्न के हो भने अन्तरिम विधान बनाइरहँदा पनि यो विषयमा छलफल गरेको भए हुन्थ्यो, त्यहाँ छलफल भएन । जहाँसम्म मेरो कुरा छ, सामान्तयतया तेस्रोपटक महासचिव हुने कुरा हुन्नथ्यो होला । तर अहिले राम्ररी छलफल गर्न पाएको भए एक ढंगले अघि बढ्थ्यो होला । मलाई पनि व्यावहारिक अप्ठेरो के थियो भने म मन्त्रीको रूपमा कार्यकारी भूमिकामा छु । तर पार्टीको काममा मसिनो ढंगले लाग्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यही देखेर अध्यक्षहरूले महासचिव राख्नुपर्ने ठान्नुभयो होला । तर जे भए पनि यस विषयमा मसँगै छलफल गर्दा पनि हुन्थ्यो ।
भनेपछि यो महासचिव भन्ने पद अकस्मात् ल्याइएको हो ? त्यसैले यो प्रक्रियाबाट तपाईं धेरै सन्तुष्ट हुनुहुन्न ?
म सन्तुष्ट असन्तुष्ट भन्ने कुनै कुरै होइन । सधैंभरि एउटै मान्छे हुने भन्ने कुरा होइन । पहिलेको सोच दुइटा अध्यक्षबाहेक अन्य पद नराख्ने भन्ने नै थियो । त्यसैले म मानसिक रूपमै त्यही ढंगले जानुपर्छ भन्नेमा तयार थिएँ ।
एकता प्रक्रिया चलिरहँदा एउटा पदमा एउटै व्यक्ति हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, तपाईंको त्यही सूत्रले अहिले तपाईं मन्त्री भएका कारण महासचिवको जिम्मेवारी चाहिं नपाउने अवस्था बन्यो कि के हो ?
त्यस्तो त होइन होला । संगठनका काममा कोही न कोही खटिएर लाग्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले भएका साथीमध्ये यो काम कसलाई जिम्मा दिने भन्ने अध्यक्षको सोच हो । हिजो महासचिवपछि पार्टीको संगठनात्मक काम उपमहासचिवका रूपमा विष्णु पौडेलेजीले पनि गर्दै आउनुभएकै थियो । अलिक छलफल गरेरै गर्दा पनि हुन्थ्यो होला । अध्यक्षहरूले के गर्दा विवेकसम्मत हुन्छ भन्ने सोच्न सक्नुहुन्थ्यो । तर उहाँहरूले अर्को कोणबाट सोच्नुभयो । तर म असन्तुष्ट छैन । पार्टीका नेताहरू आफ्नै कर्म, योग्यता र क्षमताले हाइट लिएका हुन्छन् । त्यसैले कसैले मलाई घटाइदियो र कसैले म बढँे भन्ने पनि ठान्नुहुँदैन । खालि सल्लाह गरेको भए हुन्थ्यो, किन गरिएन न भन्ने लागेको मात्र हो ।
दुई पार्टीबाट आएका अन्य पनि धेरै नेता छन्, जसलाई खास परिभाषित जिम्मेवारी छैन, उनीहरूको कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
योग्यता, क्षमता र पृष्ठभूमिका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सिद्धान्त तय गरिएको छ । त्यहीअनुसार काम र जिम्मेवारी बाँडफाँट हुन्छ ।
असन्तुष्ट नेताहरूले समूहबन्दी गरेर फेरि ससाना पार्टी नै बनाउने हुन् कि भन्ने आशंका पनि छ नि ?
यतिबेला त्यो गुन्जायस छैन । निश्चित ठाउँमा खुलस्त छलफल गर्दै जानुपर्छ । जिम्मेवार तहमा रहेका नेताहरूले खुलस्त छलफल गर्ने र त्यहीअनुसार पार्टीलाई हाँक्नुपर्छ । कहिलेकाहीं राम्रो गरेर मात्र हुँदैन, राम्रो गरेको देखिनु पनि पर्छ । यो एकता कार्यकर्ता र जनताको चाहना हो । यो चाहनाको अनुमोदन भइसक्यो ।
अहिले तपार्इं असन्तुष्ट भएपछि मनाउन उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरियो पनि भनिन्छ ?
म सन्तुष्ट, असन्तुष्ट भन्ने होइन । म रक्षामन्त्री हुँदा उपप्रधानमन्त्री नबनाउने भनियो । तर यो कुनै सिद्धान्तबाट निर्देशित थिएन । कहिलेकाहीं ५–६ जनासम्म पनि उपप्रधामन्त्री भएका थिए । यी तत्कालीन परिस्थितिका आधारमा लिइएका निर्णय हुन् । अहिले संघीय समाजवादी फोरम पार्टी सरकारमा जोडिने भयो । त्यसैले अहिले उपप्रधानमन्त्री पनि आवश्यक पर्‍यो होला । म प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा थिएँ । त्यसैले त्यो वरीयता मिलाउने सिलसिलामा मलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर मिलाइयो । मेरो वरीयता यथावत् रह्यो । त्यसैले मलाई सन्तुष्ट बनाउने वा नबनाउने भन्ने कुरासँग यसको कुनै साइनो छैन ।
तपाईं पहिले उपप्रधामन्त्री भएको व्यक्तिलाई मन्त्री मात्र बनाइयो र अहिले फेरि उपप्रधामन्त्री नै बनाइयो, यसको कारण त पक्कै केही होला नि ? वरीयता मिलाउन मात्र हो र ?
प्रधानमन्त्रीले हिजो आवश्यकता देख्नुभएन, उपप्रधामन्त्री राख्नुभएन । अहिले आवश्यकता ठान्नुभयो, राख्नुभयो । यसबाहेक अरू कारण छैन ।
अहिले नेकपाका प्रमुख नेताहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रमुखको विषयमा बहस थाल्नुभएको छ, के यो विषय पार्टीको एकीकरणकै बेलाा छलफलमा लैजाने भन्ने कुरा भएर बाहिर आएको हो ?
कुनै नेताले बोल्नुभयो भन्ने मैले सुनेँ । तर जसले पनि जुन बेला जे बोल्दा मनासिव हुन्छ, त्यही बोल्नु राम्रो हुन्छ । यतिबेला संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । तीनवटै तहका सरकार बनेका छन् । अब ती सरकारलाई प्रभावकारी बनाएर अघि बढ्नुपर्नेछ । यस्तो बेला फेरि अरू विषयमा जाने ? चुनावको साझा घोषणापत्रमा पनि यो विषय थिएन । हिजो अलग–अलग परिस्थिति भएका बेला संविधान बनाउँदा पार्टीहरूले फरक फरक प्रस्ताव राखेका थिए होलान् । तर अहिले नयाँ परिस्थिति भइसकेकाले अब त्यही पुरानो कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने ढंगले जाने भन्नु मनासिब हुँदैन । अहिले बेमौसमी कुरा गर्न कुनै पनि नेता, कार्यकर्तालाई छुट छैन ।
तर किन यो प्रस्ताव आयो त ?
खै किन आयो । जहाँबाट आयो, त्यतै प्रश्न गर्दा जवाफ आउँथ्यो कि ।
संविधान बनाउने बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने तत्कालीन एमाले, माओवादी केन्द्र र फोरम तीनवटै मिलेर दुई तिहाइको सरकार बनेकाले त्यतातर्फ जाने प्रयास भएको हो कि ?
हिजोको एमालेले संविधान सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेको थियो । माओवादी र फोरमले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनेका थिए । त्यसैले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाउने कुरा पनि एउटै ‘ट्युनिङ’ बाट आएको थिएन । त्यसबेला हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्नुका पछाडि दुइटा तर्क गरेका थियौं, अधिनायकवाद र अस्थिरता दुइटा प्रवृत्तिबाट हाम्रो राजनीतिक प्रणाली आक्रान्त थियो ।
त्यसैले शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरिरहँदा यी दुईटा प्रवृत्तिबाट मुलुकलाई बचाउनुपर्छ भन्ने ढंगले त्यस्तो प्रस्ताव लगेका थियौं । तर पछि संविधान बनाउँदा सबै दल मिलेर अहिलेको जस्तो राजनीतिक प्रणालीबाट अघि बढ्ने समझदारी गर्‍यौं । त्यसैले अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका विषयमा छलफले गर्ने बेला नै होइन । कसैले बोलिदिनुभयो अनि त्यहीअनुसारका बाजा बज्न थालिहाले । बल्लबल्ल राजनीतिक स्थिरता होला, मुलुकमा विकास र समृद्धि होला भन्ने अलिअलि आशा जाग्न थालेको छ । यही बेला फेरि अर्को हुँडलो मच्चाउने ? यसलाई अहिले छलफलको विषय नै बनाउनु हुँदैन ।
फोरमसँग संविधन संशोधन सहमति गर्नुभएको छ । संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्यो भने यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषय पनि छिराइने हो कि ?
हुँदैन । यो विषय छिर्दैन । हामीले पटकपटक संविधान असंशोधनीय दस्ताबेज होइन भनेका छौं । यो गतिशील दस्ताबेज हो । शक्ति सन्तुलनको दस्ताबेज हो, शक्ति, सन्तुलनमा हेरफेर हुनेबित्तिकै संशोधन परिमार्जन हुन सक्छ । तर के हटाउने र राख्ने भन्ने अभ्यास, अनुभव र औचित्यले पुष्टि गर्नुपर्छ । कसैलाई केही लाग्यो अनि त्यही विषय संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयले पार्टीमै विग्रह आउने अवस्था त हुँदैन नि ?
मलाई लाग्छ त्यस्तो हुँदैन । हामीले राजनीतिक स्थिरता दिनुपर्छ । अधिनायकवाद र अस्थिरतालाई बढावा दिने शासकीय स्वरूपको वातावरण तयार गर्नु हुन्न । अहिले हामी यो कुराबाट ‘डेभिएट’ भयौँ भने हिजो जुन समस्याबाट लखेटियौं, त्यसैको पुनरावृत्ति हुन्छ । अहिले पार्टीपंक्ति यस्ता विषयमा छलफल होइन र सुन्न पनि चाहँदैन ।
सरकारको कामकारबाही कस्तो चल्दै छ ?
सरकारको कामकारबाहीलाई सापेक्षिक रूपमा हेर्नुपर्छ । शतप्रतिशतको हिसाबले मूल्यांकन गर्ने कुरा पनि गर्नु हुँदैन । आजको सन्दर्भबाट अलग गरेर चर्चा गर्नु हुँदैन । हामी कस्तो अवस्थामा सरकार बनाउन पुग्यौं ? यो हेर्नुपर्छ । बेथिति भनिसक्नु थिएन । बेथितिको चाङ लागेका बेल सरकारमा आएका छौं । ती सबै कुरालाई ठीक पार्दै सुशासन दिने कुरामा गति दिनु आवश्यक छ । भनेअनुसार गर्नुपर्ने र अपेक्षा पनि धेरै होलान् । तर हामीले दीर्घकालीन सोचसाथ बहुमतले समर्थन गरेको सरकार भएकाले नयाँ भिजनका साथ अघि बढ्ने प्रयास थालेका छौं ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आयो । तर यो तपाईंहरूकै घोषणा पत्रअनुसार पनि भएन र सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पनि विरोध प्रकट गरिरहेका छन्, किन ?
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनताबाट निर्वाचित भएका सांसदले आफ्नो सहभागिता भएन कि भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ । बजेट आएपछि पनि आफूलाई लागेका कुरा मन खोलेर राख्नुभएको छ । कमजोरी भएका छन् भने कमजोरी हुन नदिने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । अब सच्याउन सकिने ठाउँ छ भने त्यो पनि गर्नुपर्छ ।
पार्टीभित्र पनि छलफल नगरी एकलकाँटे रूपमा अघि बढ्न खोज्दा यस्तो भएको हो ?
साथीहरूको प्रतिक्रिया हेर्दा बजेट निर्माणमा आफ्नो पनि ‘ओनरसिप’ हुनुपथ्र्यो भन्ने छ । त्यस्तै चुनावका बेला केही प्रतिबद्धता पनि गरिएको थियो । ती प्रतिबद्धता पूरा भएनन् कि भन्ने पनि आएको छ । जस्तो: वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ बनाउने भनिएको थियो । यो सरकारको कार्यकालमा हामी त्यो पुर्‍याउँछौं । यसपटक १ लाखको स्वास्थ्य बिमा गर्‍यौं । सामाजिक कल्याणकारी कुरा गर्नु भनेको ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता वृद्धि मात्र होइन । सामाजिक कल्याणका अन्य विधि पक्ष पनि हुन्छन् । हामी लोककल्याणकारी काम गर्छौं । त्यसका विविध रूप छन् भन्ने बुझाउन सक्नुपर्छ ।
मन्त्रीहरू पनि ठोस कामभन्दा तत्काल आफू चर्चित हुने विषयमा बढी लागेका हुन् कि जस्तो देखिएको छ नि ?
विभिन्न साथीहरू विजयी बनेर आउनुभएको छ । पार्टीले बुहमत ल्याएको छ । जनताको समर्थनको स्थिर सरकार बनेको छ । त्यसैले केही यस्ता गतिविधि भएका होलान् । त्यसै पनि राजनीतिमा ‘पपुलर’ हुने भन्ने विषयको पनि बजार छँदै छ । तर मेरो विचारमा धेरै उत्कृष्ट लाग्ने कुरा गर्नुभन्दा एउटा सरदर राम्रो काम गरेर देखाउनु चाहिं अहिलेको खाँचो हो । राम्रो कामले जनताको मन जित्दै जानुपर्छ । त्यसैले मैले चाहिं ‘पपुलर’ हुने कुरा खोज्दै हिँडेको छैन । अहिले हामीलाई हतारमा लोकप्रिय हुनेभन्दा राम्रो काम गरेर देखाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ । भर्खरै बजेट आएको छ । अब असार २५ सम्म सबै मन्त्रालयले बजेटअन्तर्गतका कार्यक्रम तयार गरिसक्छन् । त्यसपछि काम अझै राम्ररी अघि बढ्छ ।
सरकारले आस्थाका आधारमा कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरेर कर्मचारीतन्त्रलाई अस्थिर बनाउन थालेको पनि कुरा आउन थालेको छ नि ?
यस्ता कुरा नेपाली कांग्रेसको कोणबाट आएका छन् । म त चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, कहाँ अस्थाका आधारमा कसलाई बदल्यौं ? आवश्यकताअनुसार स्थानीय सरकारमा कर्मचारी पठाउनुपर्छ । त्यहाँ पठाइएको छ ।
सही मान्छेलाई सही ठाउँमा पठाइएन भन्ने पनि छ नि ?
यो दोषी चस्मा हो । केही भएको छैन । सचिवहरूको एक पटक प्रधानमन्त्रीको तहबाटै सरुवा भयो । पहिले बिगारिएको थियो । सचिवहरू को कहाँ जाने भन्ने हिसाबकिताब हुन्थ्यो । तर अहिले प्रधानमन्त्री आफैंले गृहकार्य गरेर, अनौपचारिक रूपमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुभयो । यो विषयमा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो गरे भन्ने पनि समाचार आए । तर त्यो सत्य होइन, कुनै पनि मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा त्यो निर्णयप्रति प्रश्न गरेनन् । कर्मचारीलाई नेतृत्व दिने हो । कार्यकर्तालाई चलाएजस्तो चलाउने होइन । शेरबहादुर देउवाको सरकारका पालामा के मात्र भएन ? राजनीतिक नियुक्ति हेरफेरदेखि प्रहरीका इन्सपेक्टर, डीएसपीसम्मको सेटिङ चलाइयो । मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि सेटिङ चल्यो ।
४ महिनाको अवधिलाई हेर्दा तपाईंहरूले योग्यभन्दा कार्यकर्ताजस्ता व्यक्तिहरूलाई नै विज्ञका रूपमा राख्न खोजेको देखिएको छ, किन ?
हामीले ‘करिअर पोलिटिसिएन’ र राजनीति बुझेको विषयविज्ञको संयोजनबाट मात्र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजान सकिन्छ भन्ने ठानेका छौं । त्यसैले त्यहीअनुसारका व्यक्तिलाई राखेका छौं ।
प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो व्यक्ति तपाईं हो । तर प्रधानमन्त्रीले तपाईंसँग पनि छलफल नै नगरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ ? के तपाईंहरूको सम्बन्धमा दूरी बढेको हो ?
बाहिर टिप्पणी आएको पाउँछु । तर त्यस्तो होइन । परिभाषित काममा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसैले राज्य सञ्चालनका परिभाषित काममा छलफल भइरहेको छ । जोसित जे काम हो, त्यही विषयमा छलफल गर्ने हो । हरेक मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका आफ्ना शैली हुन्छन् । गुण, अवगुण हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीका पनि कतिपय सबल कुरा छन्, कति नहोलान् । त्यसैले नेताहरूका कार्यशैलीलाई द्वन्द्वात्मक ढंगले नै हेर्नुपर्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकार त अधिनायकवादी शैलीमा जान थाल्यो भन्ने टिप्पणी गर्न थालेको छ, काग्रेससँगको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ ?
प्रतिस्पर्धाले एउटा परिणाम आइसक्यो । अब रोइकराइ गरेर हुन्छ ? आर्थिक समृद्धि र विकासको एजेन्डा त कांग्रेसको पनि हो नि । यी कुरामा मिलेर काम गर्नुपर्छ । हामी अधिनायकवादतर्फ जान्छांै भन्ने शंका गर्नुपर्दैन । हामी यो संविधान जारी गर्ने मुख्य शक्ति हौं । यसको अगुवाइ गर्ने पनि हामी नै हौं । संविधानका अन्तर्वस्तु र यसले गरेको विशष्टि व्यवस्थाबारे हामीलाई राम्रो थाहा छ । त्यतातर्फ जान सकिँदैन । कांग्रेसले यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ भनेर आफ्नो मनोदशा मात्र प्रकट गरेको हो ।
अहिले संसद्मा सभामुख र उपसभामुख पनि फरकफरक दलको हुनुपर्छ भनेर कांग्रेसले उठाइराखेको छ, यसमा तपाईंहरूको धारणा के हो ?
यसमा धेरै कुरै छैन । उहाँहरू (सभामुख, उपसभामुख) पार्टीको सदस्य हुनुहुन्न । उहाँहरूले उम्मेवारी दिनुअघि नै पार्टी सदस्यता त्याग्नुभयो । अहिले उहाँहरू कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य होइन । यो विषय अदालतमा पनि पुगिसकेको छ । त्यसैले यसमा रोइकराइ गर्नु आवश्यक छैन ।
दुई तिहाइको सरकार छ तर अझै पनि अरू दललाई सरकारमा ल्याउने आवश्यकता किन पर्‍यो ? राजपालाई किन ल्याउन लाग्नुभएको हो ?
उनीहरूलाई किन बाहिर बस्छौ, आऊ, सँगै मिलेर जाऔं भनेको हो । अर्थिक विकास र समृद्धिकै मूल उद्देश्य हो भने किन बेकारमा प्रतिपक्षी बनेर बस्छौ भनेर सरकारमा आऊ भनेको हो । आउने नआउने उनीहरूको कुरा हो।
प्रकाशित : असार ३, २०७५ ०८:१५